မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: မကျီစားပါနဲ့ ..ချစ်သူ
ရူးတော့ ရူးသွားနဲ့အုံး အန်တီမီကြီးရေ ဝေဒနာတွေ များလာရင် ဘုရားမှာ လျှူလိုက် :P တူလေးကို သတိမှ ရသေးရဲ့လား။ စိတ်ထိမ်းနော် တင်းထား တင်းထား လွတ်မသွားစေနဲ့။ အဟိ
wow.. :) you write poem too? good. I like first five lines..